corcodile bread | Colourful Recipes
Tag Archives: corcodile bread
You can shape yourcrocodile’s how ever you want.
Let rise inawarm palace. Bake at 375ºF – 18 minutes, or until crocodile is golden brown and firm to the touch.
မိချောင်း ပေါင်မုန့်မှာ အသားထည့်စားချင်လည်း ရသလို .. အသား မထည့်စားပဲ ပေါင်မုန့် သပ်သပ် ပဲ မုန့်ဖုတ်စားလို့ ရပါတယ်။
အသား ထည့်စားမယ်ဆိုရင် ကြက်သား ( သို့မဟုတ် ) ၀က်သား၊ ကြက်သွန်နီ၊ မာရို့နိစ် တို့ကို သမနေအောင် ရောနှယ်ထားပါ။ ငရုတ်ကောင်းမှုန့် နည်းနည်း၊ ဆားနည်းနည်းပါ ထည့်နှယ်ထားပါ။
ဒလိမ့်တုံးဖြင့် ဂျုံကို အပြား ကြီးကြီး လိမ့်ပေးပြီးတဲ့နောက် …
အနားများကို ညီညီညာညာ ဖြစ်သွားအောင် ဓါးဖြင့် တိ ဖြတ်လိုက်ပါ။
အသားတွေကို အလယ်မှာ ရှည်ရှည်မျှောမျှော စုံပုံ –
တစ်လိုင်းစီ အသားပေါ်မှာ ဂျုံပြားတွေကို လာအုပ် —
မံမီလိုမျိုး အသားတွေကို တစ်ရစ်ခြင်းစီ — တလိုင်းခြင်းစီ အုပ်ပါ —
အပေါ်နှင့် အောက်ဘက်က တြိဂံ ပုံစံ ဂျုံများကိုပါ အုပ်ပါ။
နောက်တခု — မိချောင်း ပေါင်မုန့် အတွက် — လိုင်း ခပ်များများ ဖြတ်ထားသော ပုံစံ —
အိမ်မှာ ဂျုံဖြတ်တဲ့ ဓါးက ပလတ်စတစ်ဓါး .. ဘေးနားမှာ ပန်းရောင် ပလတ်စတစ်ဓါးလေး .. အဲဒီလိုမျိုး တစ်ခါသုံး ပလပ်စတစ်ဓါးတွေက အသုံးတည့်တယ်။ ကြက်ဥပြုတ်၊ ဘဲဥပြုတ် အတွက်ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ပျော့ပျော့ အရာတွေကို သူနဲ့ တခါတည်း တိဖြတ်လိုက်ရင် တိတိ ရိရိ ပြတ်နေတာမျိုး ပုံစံ ရတယ်။ အိမ်က ဘဲဥပြုတ်တွေ ဖြတ်ထားတာ အပ်ချည်ကြိုးများဖြင့် ဖြတ်ထားတာ မဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒီ ပလတ်စတစ်ဓါးဖြင့် ဖြတ်ထားတာပါ။ အခု ဂျုံများကိုလည်း အဲဒီ ဓါးဖြင့် ဖြတ်ထားတာ —
ဂျုံကို တလိုင်းစီ အုပ်တဲ့ အခါ — ရှည်နေလိမ့်မယ်။ ဒီလို ပုံစံမျိုး ဂျုံကို ခေါက်ပြီး အသားပေါ်မှာ အုပ်ပေးထားမှ မိချောင်း ဗိုက်ဖောင်းဖောင်းလေး ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။
ပီးလျှင် တစ်နာရီလောက် အ၀တ်ဖြင့် အုပ်ထားပြီးမှ —
မိချောင်းကို မျက်လုံးတွေ .. လက်ချောင်း၊ ခြေချောင်းတွေ တပ် —
မိချောင်း အကြေးခွံအတွက် ကတ်ကြေးဖြင့် ညီညီညာညာ — ခပ်ဖွဖွ — အပေါ်ယံလောက်ကို လိုက်ဖြတ် —
ကြက်ဥ အနှစ်ကို နွားနို့ ထမင်းစားဇွန်း ၁ ဇွန်းနဲ့ ရောမွှေပြီး မိချောင်းကို စုတ်တံလေးဖြင့် လိုက်သုပ်ပါ။
ပီးရင် ကြိုတင် ပူနေအောင် ဖွင့်ထားသော oven ထဲ ထည့်ပြီး ပေါင်မုန့်ဖုတ်ပါ။
By Thet Nandar • Posted in Bread	• Tagged Bread, bread ingredients, breakfast, corcodile bread, dessert, egg yolk, food